Nezvedu - Beijing Landwell Electron Technology Co., Ltd.
Iine guta rakanyoreswa remamirioni makumi maviri, Landwell yakavambwa muBeijing mu1999 uye inovhara hofisi nzvimbo 5000 mativi emamirimita. Iyo inozivikanwa brand mune yekuchengetedza indasitiri uye mutevedzeri wasachigaro weChina Security Association. Muchikamu chekutanga, LANDWELL yakatanga nekukurumidza zvichienderana nehunyanzvi uye nekumisikidza kodzero dzayo dzezvivakwa zvakazara uye mabhenji akazvimiririra "Landwell" nharembozha yekuzvizivisa zvigadzirwa. Iyo yakavaka iyo hombe Guard Guard Sisitimu uye Inonzwisisika Key Management Sisitimu yepamusoro-tech uye anotungamira mabhizinesi neR&D, kugadzirwa, kutengesa uye mushure mekutengesa. Kubvira muna 2003 landwell yave ichitanga matavi nemahofisi pamusoro penyika, mushanghai, Shenzhen, Nanjing, Hangzhou, Wuhan,
Changsha, Zhengzhou, Xi'an, Chengdu, Yantai, Shenyang, Xinjiang nezvimwe, maviri maR & D nzvimbo uye imwe software Center. Zvinoenderana neongororo yakaitwa nenhepfenyuro mumunda, zvigadzirwa zveLandwell mumusika uye tekinoroji mumunda zvave zviri zveNhamba 1 zvemakore anoenderera mberi muChina uye pamusoro akaverengerwa pasirese zvakare. Zvigadzirwa zvinosanganisira vanochengetedza varindi, vane hungwaru patrolling system, indasitiri patrolling system, yakangwara kiyi manejimendi manejimendi, yepamusoro-magumo tsinga yekuwana kutonga, akangwara anti-kuba zvigadzirwa zvemumba. Nemhando dzakasiyana siyana dzezvigadzirwa uye neazvino tekinoroji, zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kunze kwenyika dzinopfuura 50 nenzvimbo dzakaita seUnited States, Germany, UK, France, Russia, Japan, Brazil, Singapore, South Africa, Poland, South Korea zvichingodaro .
Kubva 1999, Landwell ane makore gumi nematanhatu nhoroondo yekuvandudza; Yakanyorwa seimwe yeanonyora chikamu che "National Indaneti Maitiro Ekuchengetedza Yekutenderera Sisitimu",
Mutevedzeri wasachigaro weChina Security Association Iyo inozivikanwa pasi rose kambani mune otomatiki chitupa munda.
Bhizimusi rine hunyanzvi neMitengo Kona Yekurinda Yekushanya System;
Inozivikanwa yekuchengetedza brand muChina.
Chekutanga sarudzo yekuchengetedza patrolling system, akangwara kiyi manejimendi system;
Kubva pane kutendeseka: bhizinesi rinogara nekusingaperi rakavakirwa pakuvimbika.
Nechokwadi kune vanhu: iko kunaka kwevanhu, hwaro hwebhizinesi. Isu tese tinoomerera pakuteerera kutendeseka nekuchengeta kutenda kwakanaka kune vatengi, vatinoshanda navo. Mari yakakosha, asi kuvimbika kwakakwirira.
Key Management Cabinet, Yakarembera Kiyi Bhokisi, Diki Bhokisi Management System Uye Kiyi, Iyo Bhokisi Yekudzivirira Kiyi, Makuru Makuru Ekuchengetera Cabinet, Inokiyiwa Key Kabineti,